« Rodorodo Haona Fi »: hanolotra tolotrasa 400 ny mpikarakara | NewsMada
Fanolanana ankizivavy sivy taona: nidoboka am-ponja i Eddy, polisy kaominaly ...janvier 20, 2020
Conseil municipal : première réunion ce jour ...janvier 20, 2020
Conseil municipal : première réunion ce jour
Fanolanana ankizivavy sivy taona: nidoboka am-ponja i Eddy, polisy kaominaly
Sénat : Rivo Rakotovao désavoué par ses pairs
Andian’olona nikomy, nanapaka lalana, nitoraka fiara: nipoaka ny lakrimozena teny Anosibe tsena
Naina Andriantsitohaina : « Mon ennemi, c’est le non-respect de la loi »
Ho hentitra ny Ben’ny Tanàna Andriantsitohaina Naina: “Aoka hifanaja sy hanara-dalàna ary hahatsapa tena isika”
Mpanondrana vehivavy mpivarotena any Sri Lanka: Sinoa roa lahy sy vehivavy gasy iray voasambotra
Saisine de la HCC : Rivo Rakotovao s’accroche au pouvoir
“Raharaha kidnapping”: vehivavy roa sy jiolahy iray nidoboka am-ponja
« Rodorodo Haona Fi »: hanolotra tolotrasa 400 ny mpikarakara
Par Taratra sur 23/08/2019
Hiditra amin’ny andiany faharoa ny hetsika « Rodorodo Haona Fi » karakarain’ny Fiangonan’ny Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) ny 30 oktobra ka hatramin’ny 2 novambra ho avy izao, eny amin’ny Tanàna Voara Andohatapenaka. Tanjona ny hizara ny Filazantsara ho an’ny mpitsidika sy ny fampisehoana fiombonana sy fifankatiavana amin’ny sahanasa rehetra ho hita eny an-toerana. 200 ny tranoheva hampiranty sy hivarotra entana sy vokatra samihafa ho an’ny mpitsdika 30 000 andrasana mandritra ny hefarana. Hiavaka ny hetsika satria hahazo vahana ny sosialy amin’ny fizahana maimaimpoana momba ny fitiliana ny dibeta, ny fijerena ny maso sy ny aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo. « Hakana sarany 5 000 Ar kosa ny fitiliana ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza sy ny nono raha misoratra anarana any amin’ny Fiangonana ilay vehivavy. 10 000 Ar ny vola hefaina raha tonga eny an-toerana ka maniry ny hatao ireo karazam-pitiliana ireo », hoy ny komity mpikarakara, i Disaile Lala, teny Analakely, omaly.
Hampiofanana momba ny fambolena sy ny fiompiana ny teknisianina manokana ho an’ireo vonona hitrandraka izany fihariana izany. Hanome fahalalana manodidina ny fahaiza-mitarika sy ny fandraharahana ny mpikarakara ho an’ireo liana. Ankoatra izay, hisy tolotrasa 400 miandry ny mpitady fivelomana miaraka amin’ny orinasa maro.
Ho an’ny andiany faharoa, manamarika azy ny “Kolorallye” hiandrasana fiara 40 ahitana mpanamory roa ka hatramin’ny efatra isaky ny fiara izay hifaninanana amin’ny familiana fiarakodia. “Sady fialamboly no fanampiana ny sosialy ny hetsika”, hoy ny sekretera jeneralin’ny FJKM, Radimison Jonah.
Fanolanana ankizivavy sivy taona: nidoboka am-ponja i Eddy, polisy kaominaly 20/01/2020
Conseil municipal : première réunion ce jour 20/01/2020
Ho famaritana laminasa: fantarina ny fari-piainan’ny Malagasy 20/01/2020
Tranombarotra Shoprite: miezaka hatrany mampidina ny vidin’entana 20/01/2020
Fiarovana ny zavaboahary sy ny ala; 57 tapitrisa dolara ny fanampiana avy amin’ny USAID 20/01/2020
Tsy antonona intsony